प्रतिनिधिसभामा जम्मा २७१ सांसद छन् तर ओली र देउवाले कहाँ बाट पुर्याए ३०२ सांसद ? – नेपाली संगसार
Home राजनीति प्रतिनिधिसभामा जम्मा २७१ सांसद छन् तर ओली र देउवाले कहाँ बाट पुर्याए ३०२ सांसद ?
काठमाडौं । राष्ट्रपतिले नयाँ प्रधानमन्त्री दावी गर्न दिएको समय सकिएको छ । राष्ट्रपतिको आह्वान अनुसार संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको सरकार गठनका लागि दुई नेताले प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्दै निवेदन र सांसदको हस्ताक्षर पेश गरेका छन् ।
जसमा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउवा छन् । ओलीले आफ्ना पक्षमा १५३ सांसद रहेको दावी सहित हस्ताक्षर राष्ट्रपतिसामु पेश गरेका छन् भने देउवाले आफ्ना पक्षमा १४९ सांसद रहेको दावी गरेका छन् ।